देखाउनमात्र महिला उच्चतहमा पु-याइएको छ : सभापति बाेखिम |
प्रकाशित मिति :2016-02-23 12:38:37
लिलादेवी बोखिम लिम्बु ताप्लेजुङ काग्रेंस महाधिवेशनबाट सभापति पदमा अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित भइन्। उनी ताप्लेजुङ कांग्रेसको इतिहासमा पहिलो महिला सभापति भएकी हुन्। राजनीतिसँगै सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि उतिकै सक्रिय उनले सहासका साथ राजनीतिको दाउपेचमा होमिएर जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकी छन्। महिला खबर डट कमका लागि रमला सिगंकसँग कुरा गर्दै उनले देखाउनका लागि मात्र महिलालाई उच्चतहमा पुर्याइएको बताइन्।
अधिकांस जिल्लामा पुरुष सभापति भएका छन्। तपाई ताप्लेजुङमा कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ यो कसरी सम्भव भयो ?
मैले धेरै वर्षदेखि पार्टीमा लगानी गरें। ०७० को दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि मैले क्षेत्र न १ बाट टिकट पाएकी थिएं। त्यसबेला पार्टीको आन्तरिक कारणले केही असहयोग भएपनि म ७० मतले मात्रै पराजित भएँ। हारेपनि पार्टी सुधार्न इमान्दार भएर लागिरहें। त्यसैको परिणाम फेरि ताप्लेजुङ कांग्रेसको क्षेत्र न.१ को सभापतिमा उम्मेदवार हुँदा अन्य तीनजना पुरुष दाजुभाई मेरो विपक्षमा उम्मेदवार हुदँहुदै मैले बहुमतले विजय हासिल गरें। मैले अत्यधिक ५१ प्रतिशत मत पाएँ।
कांग्रेस जस्तो ठूलो पार्टीमा महिला उम्मेदवारले पुरुष उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कतिको कठिनाई भोग्नु भयो ?
कठिनाई त धेरै भोगें जुन भनेर साध्य छैन। हाम्रो समाज र परिवारमा अझै पनि महिला र पुरुषवीच विभेद गरिरहेको अवस्था छ। महिलालाई पुरुषको दाँजोमा पुगेको स्वीकार्न सकेको छैन। तर, मान्छे निरन्तर लागिपरेपछि बाध्यता हुँदो रहेछ। म सभापतिमा उम्मेदवारमा भिड्दा ताप्लेजुङ जस्तो दुर्गम जिल्लाको हकमा चाहीँ धेरै कुरा बुझ्ने साथीहरू रहेछन् भन्ने मलाई लाग्यो। महिलाको आर्थिक र सामाजिक विकास केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा पनि सक्रिय सहभागी हुने, नेतृत्व गर्ने काम गर्दै आएको अवस्थामा कठिनाईहरु त भोग्नु पर्‍यो।
नेतृत्व तहसम्ममा महिला सहभागिता बढाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ ?
साँच्चै भन्ने हो भने महिलालाई साक्षीको रुपमा मात्र सहभागी गराइन्छ। वास्तविक नेतृत्वको जिम्मा दिने गरी महिलालाई सहभागिता गराउनु पर्‍यो नि। जिम्मेवारी पाएपछि मात्र महिलाले गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। महिलालाई नेतृत्व तहसम्म पुर्‍याइएको राजनितिक गतिविधिका साथै समाजिक विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले यसैमा जोड दिँदै आएकी छु। पार्टीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा गरेपनि संख्या पुर्‍याउनमै सिमित छ। नेेतृत्व तहमा पुर्‍याउन जोड दिएको देख्दिनँ। यो कागजमै सिमित छ। त्यसैले विशेष कार्यक्रमको प्याकेज बनाएर जानु आवश्यक छ।
पार्टीलाई लैङि्गकमैत्री बनाउन के गर्नु पर्ला ?
महिलालाई अवसर दिनुपर्छ। यसका लागि महिलाले भन्दा पुरुषले पहल गर्नु जरुरी छ। सामाजिक संरचना पुरुष प्रधान भएकाले पुरुषले मात्र गर्न सक्छ महिलाले गर्न सक्दैन भन्ने आम मानसिक धारणा छ। क्षमता भएका महिला भएपनि उनीहरूलाई नेतृतव तहसम्म ल्याउन चाहदैनन्। पुरुषले सहयोग गरेमा समान रुपमा अघि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले सवै राजनीतिक दलका पुरुषले र महिलाले लैङि्गकमैत्री बनाउनु पहल गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा महिला राज्यको नेतृत्व तहमा पुगेपनि आम महिलालाई समाजमा अझै दोश्रो दर्जाकै रुपमा हेरिन्छ। पुरुषसरह किन सम्मान गरिन्न ?
यो त पुरानै सामाजिक संरचनाको उपज हो। २१ औं शताव्दीमा पनि हाम्रो सोच पुरा बदलिएको छैन। पुरुषलाई मात्र सम्मान गर्ने प्रचलनले यस्तो भएको हो। उच्च तहमा महिलाहरू पुगेपनि उनीहहरू अल्पमतमा पर्छन्। बहुमत त अझै पुरुषकै छ। आफ्नो पक्षमा वकालत गर्दा पनि अल्पमतमा परेपछि केही महिला उच्च तहमा पुग्नुको कुनै अर्थ छैन। महिलालाई उच्च तहमा देखाउनका लागिमात्र पुर्‍याइएको छ। त्यसैले यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ।